ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကို အတိုင်း အတာတစ်ခု ထိ ကာကွယ်ပေးနိုင် တဲ့ အစားသောက် (၅)မျိုးး – Shwewiki.com
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ် ကို အတိုင်း အတာတစ်ခု ထိ ကာကွယ်ပေးနိုင် တဲ့ အစားသောက် (၅)မျိုးး
အခု လိုအခြိနျမှာ သငျ့အနနေဲ့ ကိုယျခံစှမျးအားကို တတျနိုငျသလောကျ မွှငျ့တငျထားဖို့ လိုအပျနပေါပွီ။ အောကျဖျောပွပါ အစားအသောကျ ၅ မြိုးကတော့ သငျ့ကို တခွားလူတှနေဲ့ယှဉျရငျ ကိုယျခံစှမျးအားမွငျ့နစေမှောဖွဈပွီး ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈကနပေါ အတိုငျးအတာတဈခုထိ ကာကှယျပေးနိုငျပါလိမျ့မယျ။
အဲ့တာတှကေ ဘာတှလေဲဆိုတော့. . .
၁။ ခဉျြတဲ့ အသီးတှေ
လိမ်မျောသီး ၊ သံပုရာသီး ၊ ဂရိတျဖရုသီးတှကေိုပွောတာပါ။ သူတို့မှာအမြားဆုံးပါတဲ့ vatmin C က သှေးဖွူဥ ထုတျလုပျမှုကို မွှငျ့တငျပေးပွီး သငျ့ကို ကိုယျခံစှမျးအားမွငျ့တကျလာစပေါတယျ။
ငရုတျပှသီးအနီမှာတော့ vatamin C အပွငျ beta carotene ကွှယျဝစှာပါဝငျပါတယျ။ beta carotene က သငျ့ကို မကျြလုံးနဲ့ အရပွေားကနျြးမာရေးအတှကျ အမြားကွီးအထောကျအကူပေးနိုငျလို့ ဒီနရောတှကေနေ ပိုးမှားကူးစကျမဲ့ အန်တရညယျကနပေါ ကာကှယျပွီးသားဖွဈစမှောပါ။
ပနျးပှငျ့စိမျးမှာ ဗီတာမငျ A , C , E တှကွှေယျဝစှာပါဝငျလို့ သငျ့ရဲ့ကနျြးမာရေးအတှကျ အမြားကွီးအထောကျအကူပွုနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ bracoli ကို ဖွဈနိုငျရငျ အနညျးငယျသာခကျြပွုတျဖို့ ရညျညှနျးကွပါတယျ။ အစိမျးတိုငျး သခြောဆေးကွောပွီးစားတာကလညျး ဗီတာမငျဓါတျတှကေို ပိုမိုရရှိစပေါတယျ။
ကွကျသှနျဖွူကလညျး ရောဂါကာကှယျပေးနိုငျတဲ့နရောမှာ နာမညျကွီးလှပါတယျ။သှေးပေါငျခြိနျကိုထိနျးညှိပေးပွီး နှလုံးကနျြးမာရေးအတှကျပါ ထောကျပံ့ပေးနိုငျတဲ့ အတှကျ အခုလိုအခြိနျမှာ မဖွဈမနေ စားသငျ့တဲ့အရာတဈခုပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဂငျြးက လညျခြောငျး ရောငျရမျးတာနဲ့ ခွောကျကပျနာကငျြတာတှကေို သကျသာစလေို့ လညျခြောငျးနဲ့ အသကျရှူလမျးကွောငျးကနေ ကူးစကျနိုငျတဲ့ အခုလိုဗိုငျးရပျဈမြိုးအတှကျကို အသငျ့လြျောဆုံးလို့ ဆိုရပါမယျ။
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ အစားသောက် (၅)မျိုးး
အခုလိုအချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို တတ်နိုင်သလောက် မြှင့်တင်ထားဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။ အောက်ဖော်ပြပါ အစားအသောက် ၅ မျိုးကတော့ သင့်ကို တခြားလူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်နေစေမှာဖြစ်ပြီး ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကနေပါ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အဲ့တာတွေက ဘာတွေလဲဆိုတော့. . .
၁။ ချဉ်တဲ့ အသီးတွေ
လိမ္မော်သီး ၊ သံပုရာသီး ၊ ဂရိတ်ဖရုသီးတွေကိုပြောတာပါ။ သူတို့မှာအများဆုံးပါတဲ့ vatmin C က သွေးဖြူဥ ထုတ်လုပ်မှုကို မြှင့်တင်ပေးပြီး သင့်ကို ကိုယ်ခံစွမ်းအားမြင့်တက်လာစေပါတယ်။
ငရုတ်ပွသီးအနီမှာတော့ vatamin C အပြင် beta carotene ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ beta carotene က သင့်ကို မျက်လုံးနဲ့ အရေပြားကျန်းမာရေးအတွက် အများကြီးအထောက်အကူပေးနိုင်လို့ ဒီနေရာတွေကနေ ပိုးမွှားကူးစက်မဲ့ အန္တရညယ်ကနေပါ ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်စေမှာပါ။
ပန်းပွင့်စိမ်းမှာ ဗီတာမင် A , C , E တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်လို့ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် အများကြီးအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ bracoli ကို ဖြစ်နိုင်ရင် အနည်းငယ်သာချက်ပြုတ်ဖို့ ရည်ညွှန်းကြပါတယ်။ အစိမ်းတိုင်း သေချာဆေးကြောပြီးစားတာကလည်း ဗီတာမင်ဓါတ်တွေကို ပိုမိုရရှိစေပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူကလည်း ရောဂါကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့နေရာမှာ နာမည်ကြီးလှပါတယ်။သွေးပေါင်ချိန်ကိုထိန်းညှိပေးပြီး နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက်ပါ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ အတွက် အခုလိုအချိန်မှာ မဖြစ်မနေ စားသင့်တဲ့အရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျင်းက လည်ချောင်း ရောင်ရမ်းတာနဲ့ ခြောက်ကပ်နာကျင်တာတွေကို သက်သာစေလို့ လည်ချောင်းနဲ့ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကနေ ကူးစက်နိုင်တဲ့ အခုလိုဗိုင်းရပ်စ်မျိုးအတွက်ကို အသင့်လျော်ဆုံးလို့ ဆိုရပါမယ်။
သမီးလေး ရဲ့မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွှင်စေ ဖို့ ဆုမတောင်း ပဲ ပျော်ရွှင်အောင် ပဲ ဖန်တီးပေးလိုက်တယ် ဆိုတဲ့ ဘုဏ်းသိုက်
ပိုက် ဆံ အကြွေး ရစရာရှိ တဲ့ သူတွေ တောင်းစရာမလို ပဲ ပြန်လာပေးစေ တဲ့ အကောင်းဆုံး ယတြာ